WatchOS 4.3 beta 2 dia eo am-pelatanan'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Io ilay mbola ho avy ary eto amintsika, ny beta 2 ho an'ny mpamorona ny rafitra fiasan'ny Apple Watch, fiambenanaOS 4.3. Tsy isalasalana fa mahita famoahana tsy misy fandrindrana betsaka amin'ny lafiny Apple isika, saingy zavatra iray izay tato ho ato dia "ao anatin'ny fanao mahazatra" ireo kinova beta farany navoaka.
Tsy misy andro iray ho an'ny kinova manokana iray na roa, ny bandy avy ao amin'ny Cupertino dia mandefa azy ireo rehefa hitany fa mety ary tokony hieritreritra ianao fa tsy maintsy mandalo ny sivana mitaky be indrindra izy ireo mandra-pahatongany any amin'ireo mpamorona, izay hiandraikitra ny manohy manatsara ny tsirairay amin'izy ireo mandra-pahatongany any amin'ny mpampiasa farany.
Fanamboarana bibikely, fanatsarana ny fahombiazana ary fitoniana eo amin'ny rafitra no zava-baovao farany hita amin'ity andiana betas navoaka tamin'ity herinandro ity. Natomboka omaly ny kinova mpamorona ny macOS High Sierra ary androany tonga ihany ny beta faharoa ho an'ny watchOS.
Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe kokoa ny hialantsika amin'ny beta satria raha manavao isika dia tsy ho afaka ny hisintona ny kinova na dia misy olana momba ny bibikely na mifanentana aza izany. Apple dia tsy maniry ny kinova Apple Watch hahatratra ireo mpampiasa izay misoratra anarana amin'ny programa beta ho an'ny daholobe ary noho izany dia tsy manana ireo kinova ireo izahay afa-tsy ho an'ny mpamorona. Tsy isalasalana fa raha sanatria ka misy vaovao miavaka miseho amin'ity beta ity dia hizara azy aminareo rehetra izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » WatchOS 4.3 beta 2 dia eo am-pelatanan'ny mpamorona ankehitriny
Marcelo berrios dia hoy izy:
Tsy ny WatchOs 4.3 beta 2 ve?
Valiny tamin'i Marcelo Berrios
Tsara Marcelo, manana olana amin'ny fanisana ireo beta mandeha lamba aho ...
Misaotra tamin'ny fampitandremana dia nanitsy izahay !!